Vola vaovao : ireo pitsopitsony 14 tokony ho fantatrao mikasika azy sady hitandremana amin'ny vola sandoka • Madagossip
Vola vaovao : ireo pitsopitsony 14 tokony ho fantatrao mikasika azy sady hitandremana amin’ny vola sandoka
il y a 2 années 1	11.3 K
Ireto misy pitsopitsony 14 tokony ho fantatrao mikasika ny vola vaovao. Zarazarao izy ity mba samy hahafantatra ny rehetra ary samy hitandremana amin’ny vola sandoka.
Ny antony nanontàna vola vaovao
Ilaina ny fanontàna vola vaovao. Mihazakazaka ny fandrosoan’ny teknolojia mikasika ny fanamboarana vola taratasy. Tsy i Madagasikara irery fa misy firenena maro hafa ihany koa no namoaka vola vaovao tato ho ato.
Efa an-taonany maro i Madagasikara no nampiasa ireo vola teo aloha, ny mpanao vola sandoka anefa dia mivoatra ihany koa tao anatin’izay 10 taona mahery izay.
Noho izany dia nohamafisana ny vola vaovao hampiasa ny hiaka farany, mba tsy hisy intsony ny vola sandoka.
Vola vaovao, fiarovana hiaka farany
Marika sy sary mampiavaka ny vola vaovao
ny recto na face dia ilay tsy misy ny laharana na numéro, ny verso ilay misy ny laharana na numéro
ny laharana na numéro dia misy dika roa mitovy ary sora-mandry (italique) ny eo ambany ankavanana.
feno soratra madinika : « BFM/sorabola »
tsy ahitana sarin’olona toy ny teo aloha intsony ny vola vaovao fa novaina sary mifono ny hevi-dehibe (thème) hoe : « Madagasikara sy ny harena voajanahary, ny kolontsaina, ny fizahantany ary ny toekarena mampiavaka ny faritra enina »
Thème : Madagasikara sy ny harena voajanahary
Ireto kosa ireo sary samihafa izay mampiavaka an’i Madagasikara :
20 000 Ariary : Usine Ambatovy, Vokatra fanondrana
10 000 Ariary : Port Ehoala Fort Dauphin, Zava-maneno
5 000 Ariary : Cascade Ranomafana, Queue de baleine
2 000 Ariary : Lémurien, Plante carnivore
1 000 Ariary : Pont Kamoro, Reine de l’Isalo
500 Ariary : Rova d’Ambohimanga, Tsingy Rouge de Diégo
200 Ariary : Chute de la Montagne d’Ambre, Lausiard,
100 Ariary : Cathédrale Ambozontany Fianarantsoa, Grenouille Mantella S.
NB: Fantaro fa Ambatovy dia misahana ny 25% ny PIB malagasy.
Thème eo amin’ny vola vaovao
Tagsariary banknote billet de banque madagascar roa alina vola vola vaovao
Sports	il y a 1 année
Série	il y a 1 année
Ireto ny mpandraharaha 10 manankarena indrindra eto Madagasikara
Tatasika	il y a 2 années 3
Santé	il y a 2 années